Indlela yokujongana nokuphazamiseka kwengqondo ngaphakathi kwesi sibini | IBezzia
UMaria Jose Roldan | 19/07/2021 22:40 | Psicología
Ukuhlala nomntu onengxaki yokuphazamiseka engqondweni yinto enzima ngokwenene, ngakumbi ukuba liqabane lakho. Akukho lula kwaye ukuba awazi ukuba usithwale njani eso siphazamiso, oko kunokubangela ukuba ubudlelwane buphele ngokuhamba kwexesha.
Ukuthintela isibini ukuba siphelelwe ngumhla, Kubalulekile ukuba omabini amaqela afune ukusombulula imeko enjalo kwaye afunde ukuhlala nayo. Siza kukunika uthotho lwezikhokelo ekufuneka uzilandele ukuze ubudlelwane busempilweni kangangoko, ngaphandle kokuphazamiseka kwengqondo kwelinye lamaqela.
1 Xhasa esi sibini
2 Funda malunga nokuphazamiseka kwengqondo
3 Vumela iingcali zisebenze
4 Ukubaluleka kwonyango
Xhasa esi sibini
Akukho lula ukuba nabani na afumanise ukuba unesifo sengqondo, ngakumbi ukuba usebudlelwaneni. Kule meko, omnye umntu kufuneka akubonise inkxaso yabo epheleleyo kwaye akwenze ubone ngamaxesha onke ukuba awuwedwa. Ukuziva ubabalo lokuba nenkxaso nothando lweqabane lakho kubalulekile xa kusiziwa ukoyisa ukuphazamiseka kwengqondo.
Funda malunga nokuphazamiseka kwengqondo
Nje ukuba kufunyaniswe isifo ukuba umntu omthandayo unesifo sengqondo, Lixesha lokuba uqokelele ulwazi oluninzi ngangokunokwenzeka malunga nokuphazamiseka okunjalo. Kulungile ukuya kwiingcali ezaziwayo okanye iwebhusayithi ezinceda ukwazi okungakumbi malunga nokuphazamiseka okunje kwaye ngale ndlela uncede isibini ngendlela efanelekileyo.
Vumela iingcali zisebenze
Ukufuna ukufunda malunga nokuphazamiseka akuniki umntu ilungelo lokuba ngumlingane weqabane lakhe. Ngenxa yoku, kungcono ukuba iingcali zenze umsebenzi wazo kuba ziyayazi into eziyenzayo kwaye zinokunceda ukunyanga ukuphazamiseka okunje. Umsebenzi wesibini kufuneka ube kukuxhasa kuyo yonke into efunekayo nokubabonisa uthando xa belufuna.
Kuhle ukukhumbula ukuba umntu ogulayo akanakunika lonke uxanduva kwiqabane lakhe. Umntu onengxaki yokuphazamiseka kufuneka athathe isabelo sakhe kwaye enze konke okusemandleni ukuze akwazi ukoyisa ukuphazamiseka kwaye ngale ndlela ayenzakalisi ubudlelwane ngokwabo ngendlela engeyiyo.
Ukuya kunyango kubaluleke kakhulu xa kufikwa kuloyiso lokuphazamiseka kwaye thintela esi sifo ekupheliseni ukonakalisa ubudlelwane. Iingcebiso ezifanelekileyo zinceda isibini ukuba sikwazi ukulawula iimvakalelo ezahlukeneyo ezithi zibangelwe kukuphazamiseka okunje. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba isibini sisempilweni kangangoko ngaphandle kweengxaki ezinokuvela ngokuhlala sigula ngengqondo.
Ngamafutshane, akukho lula ukuhlala neqabane elithe lafunyaniswa ligula ngengqondo. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ube nolwalamano olusempilweni oluvumela abantu bobabini ukuba bomeleze uthando lwabo kunye nomsa. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuxhasana kwaye uthathe umdla kunyango lwesifo sengqondo. Nokuba uya kunyango okanye kwingcali, Ngubani owaziyo ukunceda umntu ogulayo ukuba oyise iingxaki kwaye akhathalele ubudlelwane bababini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Psicología » Indlela yokujongana nokuphazamiseka kwengqondo ngaphakathi kwesi sibini